GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Armenian (West) Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Bosnian Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Digor Drehu Dutch Edo Efik English Esan Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Gitonga Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Hungarian Sign Language Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Itsekiri Japanese Japanese Sign Language Kabiye Kabuverdianu Kabyle Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Konkani (Roman) Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lingala Lithuanian Low German Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mari Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mende Mexican Sign Language Mingrelian Mixe Mixtec (Guerrero) Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Norwegian Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Somali Spanish Spanish Sign Language Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Sãotomense Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Ndịàmà Jehova na-agwa ndị mmadụ ka ha na ha mụwa Baịbụl. Ha na ha mụwa Baịbụl, ha na-aza ha ajụjụ ndị dị ka:
Ihe gbasara m ọ̀ na-emetụ Chineke n’obi?
Gịnị ka m ga-eme ka mụ na di m ma ọ bụ nwunye m na-ebi n’udo?
Olee ihe ga-eme ka obi na-atọ m ụtọ?
N’okpuru ebe a, a zara ụfọdụ ajụjụ a na-ajụkarị gbasara otú anyị na ndị mmadụ si amụ Baịbụl.
Olee otú e si eme ya? Ọ na-abụ anyị welite otu isiokwu, anyị agụọ amaokwu Baịbụl ndị kwuru gbasara ya. Anyị na-abịazi leruo amaokwu ndị ahụ anya ka anyị mata ihe Baịbụl n’ozuzu ya kwuru n’okwu ahụ. Otú a anyị si eme ya na-eme ka ndị mmadụ hụ na ọ bụghị uche anyị ka anyị na-akọwa kama na ọ bụ ihe Baịbụl n’onwe ya kwuru.
E nwere akwụkwọ anyị na ndị mmadụ na-eji amụ Baịbụl. A na-akpọ ya Gịnị Ka Baịbụl Na-akụziri Anyị? Akwụkwọ a kọwara ihe Baịbụl kụziri gbasara Chineke, Jizọs, ihe Chineke ga-emere ụmụ mmadụ n’ọdịnihu nakwa ihe ndị ọzọ.
Ego ole ka mmadụ ga-akwụ maka ọmụmụ ihe a? Anyị anaghị ana mmadụ ego maka ya. O nweghịkwa ego ole a ga-agwa mmadụ kwụọ ka e nye ya akwụkwọ anyị na ya ga-eji na-amụ ihe.
Awa ole ka anyị na ndị mmadụ na-eji amụ ihe? Ụfọdụ ndị na-ewepụta otu awa n’izu ọ bụla ka anyị na ha mụọ Baịbụl. Ma, ọ bụghị iwu na ọ ga-abụrịrị otu awa. Nkeji ole ọ bụla ị gwara anyị ka anyị na gị were mụọ ihe, anyị ga-anabata ya.
M kweta ka a mụwara m Baịbụl, gịnị ga-eme? Ọ bụrụ na ị gwa anyị ka anyị na gị mụwa Baịbụl, anyị ga-agwa Onyeàmà Jehova ka ọ bịa na nke gị mgbe ọ bụla ị chọrọ. Ọ ga-eji nkeji ole na ole gosi gị otú ọmụmụ ihe ahụ na-adị. Ị chọzie ka ọ na-abịa na nke gị, gị agwa ya.
Ọ bụrụ na m kweta ka a mụwara m Baịbụl, ọ̀ pụtara na m ga-abụzi Onyeàmà Jehova? Mba. Ịmụrụ ndị mmadụ Baịbụl na-atọ Ndịàmà Jehova ụtọ. Ma anyị anaghị agwa mmadụ na ọ ga-abụrịrị Onyeàmà Jehova. Kama, anyị na-emeda obi kọwaara onye ahụ ihe Baịbụl kwuru, hapụzie ya ka o jiri aka ya kpebie ma ọ̀ ga-ekweta ihe anyị kụziiri ya ma ọ̀ bụ na ọ gaghị ekweta.—1 Pita 3:15.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Bụ Ọmụmụ Baịbụl?
ijwfq isiokwu 15